लामखुट्टे मारेर ट्वीटरमा पोस्ट गर्दा ‘एकाउन्ट’ नै बन्द ! लामखुट्टेको उपहास गरेको आरोप - IAUA
ramkrishna October 9, 2017	लामखुट्टे मारेर ट्वीटरमा पोस्ट गर्दा ‘एकाउन्ट’ नै बन्द ! लामखुट्टेको उपहास गरेको आरोप
‘नेमु इज माइ वाइफ’ ट्वीटर ‘ह्यान्डल’ रहेको ती युवकले लामखुट्टे मारेर ट्वीटरमा पोस्ट गरेपछि उनको पोष्टलाई ३१ हजारभन्दा बढी ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले रिट्वीट् र २७ हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका थिए । त्यसपछि ट्वीटरले उनको एकाउन्ट नै बन्द गरिदिएको ‘बीबीसी’ले उल्लेख गरेको छ ।
ट्वीटरमार्फत गाली तथा वेइज्जती र समाजमा हिंसा भड्काउने खालको सन्देश प्रवाह गरेमा प्रयोगकर्ताको ‘एकाउन्ट’ बन्द गरिने शर्त राखिएको छ । तर, ती युवकको ट्वीटर एकाउन्ट निलम्बित गरिनुको कारण भने लामखुट्टे विरुद्ध अफवाह फैलाएर उपहास गरेर नियम उल्लघंन गरेको ‘ट्वीटर जापान’ले उल्लेख गरेको छ ।
Next Next post: धर्तीको एक कुना, जहाँ ज्वालामुखी निस्किरहन्छ, पानीको साटो तेजाबको तलाउ